नामग्याल, तिम्रो परिचय फेरिनुहुँदैन | कथा | बिना थिङ | दशैं साहित्य विशेष
म आफै जन्मेको हुँ: रोशन
नामग्याल, तिम्रो परिचय फेरिनुहुँदैन
भिक्त्तोर द्रागुन्स्की (भावानूवादः पूर्ण पी राई)
पोलमा झुण्डिएको आवाज
गिरि श्रीस मगर
नरेश काङमाङ राई
‘कवि, तिमी काम चाहिँ के गर्छौ ?’
लालहिरा प्याखंको खोजी
नेशन श्रेष्ठ र पुष्पा पलाञ्चोके
पश्चिमा अन्वेषकको आँखामा नेपालः कति ज्ञाननीति ? कति राजनीति ?
डा. महेशराज पन्त
धरानको लकडाउनमा हाइकिङ
झल्यास्स भएँ उसको नाम सुनेर । पत्रिकाका पानामा गाडिएका नजर कक्षा–९ मा भर्ना हुन आएको त्यो नयाँ केटोतिर हुत्तिए ।
मुहार देखेर झनै चकित भएँ म । मनमा एक लहर विचार दौडियो – ‘यो त उही हो ।’
उसका आँखा पनि त यस्तै चिम्सा थिए । यस्तै दबेको थियो नाकको डाँडी । यस्तै पाक्दै गरेको किम्बुजस्तै कलेजी थिए ओठ । यस्तै निख्खर कालो, बाक्लो थियो कपाल । यस्तै सजिवनको चोपजस्तै थियो छालाको रङ ।
उही त होइन ? एकक्षण भ्रममा परें । भ्रम मीठो त हुन्छ तर क्षणिक । आफैंलाई सम्हालें । कहाँ किशोरतिर लम्किरहेको यो बालक ! कहाँ ऊ ! अहिले त ऊ मजस्तै ढल्किंदो यौवनमा होला । मेरो जस्तै उसको उमेर पनि क्यालेण्डरसँगै पुराना हुँदै गए होलान् । र, मेरो जस्तै उसको पनि विगत स्मृतिहरूमा समयको धूलो थपिंदै गए होला । साँच्ची कहाँ होला ऊ ? अरबको खाडीमा कि मुग्लानको दरबानीमा ? ज्यामी पो बन्यो कि ? कि जिन्दगीको निमेक गुजार्न उसका बाजस्तै भेटेजतिको काम गर्दै होला ? मैले जस्तै पढेको भए ऊ पनि मजस्तै हुन्थ्यो होला । होइन, ऊ मभन्दा अझ उँचाइमा पुग्थ्यो होला । जेहेनदार थियो नि त !
ऊ मजस्तै थियो । म ऊजस्तै । कहिलेकाहीं लाग्थ्यो, प्रकृतिले हामी दुईलाई फरक–फरक परिवार र लिंगमा जन्माइदियो । खासमा हामी एउटै हौं ।
थाहा छैन, कहिलेदेखि ऊ र म साथी बनेका थियौं । तर, गाउँकै मुजुरधाप निम्नमाध्यमिक विद्यालयको पहिलो कक्षाका विद्यार्थी बनेदेखि नै हामी सँगै स्कूल जान थालेका थियौं । फर्किंदा पनि सँगै हुन्थ्यौं । स्कूलबाट फर्केपछि गृहकार्य गर्दा पनि सँगै । खेल्दा पनि सँगै ।
हाम्रोभन्दा पाँच घर पर त थियो उसको घर । पूर्व फर्किएको । बाकलले बेरेको । एकपाखे । अलकत्राको टिनले छाएको । ढोका पनि टिनकै थियो । छिर्नासाथ दायाँपट्टि देखिन्थ्यो, ढुंगाको चुल्हो । बायाँपट्टि हुन्थ्यो, बाख्रा बाँध्ने टाट्ना । अनि भित्र हुन्थ्यो, दुईवटा खाट र एउटा ध्वाँसो लागेको ट्याङ्का ।
हाम्रो जस्तै थियो हाम्रो घरको मित्रता । हाम्रोमा मीठो–मसिनो पाक्दा कर्कलाको पातले कचौरा ढाकेर उसकोमा पुर्‍याउन लगाउँथिन् आमाले । उसका बाले सिमेभुमे पूजा गर्दा चढाएको कुखुराको भालेको मासु पुर्‍याउन आउँथे । सँगसँगै ऊ पनि आउँथ्यो । बा फर्किन्थे । ऊ मसँगै खेल्थ्यो ।
थाहा छैन, हाम्रो मित्रता पहिले शुरू भयो कि हाम्रा आमाहरूको । हामीजस्तै मिल्ने साथी थिए ती । उसका बा हिउँदमा सधैंजसो वन जान्थे । सखुवाको दाउरा ल्याउँथे । त्यो दाउरा बोकेर उसकी आमा बजार जान्थिन् । दाउरा बेचेको पैसाले रायोको साग र गहुँको पीठो किन्थिन् । कहिलेकाहीं राँगाको मासु र उसिनेको चामल पनि किन्थिन् । उसलाई कापी, किताब र स्कूलको फि तिर्थिन् ।
चुरोटको तलतल लाग्दा हाम्रो दोकानमा आउँथिन् । स्कूलसँगै टाँसिएको थियो, हाम्रो काठको सानो दोकान । त्यही दोकानमा उसकी आमा र मेरी आमा बसेर एउटै चुरोट पालोपालो तान्थे । कहिल्यै नसकिने गफ गर्थे । खितखिताएर हाँस्थे । लाग्थ्यो, उनीहरूको मित्रताको पुल त्यही चुरोट थियो ।
तर हाम्रो मित्रतामा कुनै पुल थिएन । हामी त एउटै खोला थियौं । एउटै बहावमा, एउटै दिशामा, एउटै गतिमा, एउटै सुरमा, एउटै तालमा बहिरहेका । फरक यत्ति थियो, ऊ हाम्रो कक्षाको फस्र्ट ब्वाई थियो । र, म औसत विद्यार्थी । फेल त म पनि कहिल्यै भइनँ । ऊ पहिलोबाट दोस्रो पनि कहिल्यै भएन । त्यसैले त भन्थे सरहरूले– ‘यो नाङसाल हाम्रो स्कूलको इज्जत हो ।’
हो, कम बोल्थ्यो ऊ । उसको हिस्साको भाग पनि मै बोलिदिन्थें । अलि लज्जालु थियो । शायद मेरो भागको लज्जा पनि उसैले चोरेको थियो । सबैको प्रिय विद्यार्थी थियो । स्कूलमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सधैं अगाडि हुन्थ्यो । तर, आफ्नै स्वभावले थोरै थिए उसका साथी । म हुँदाहुँदै उसलाई साथी नै किन चाहिन्थ्यो र ?
उसको सम्झनासँगै विगत दिनहरू आँखैमा आइदिए ।
कसरी ऊ र म हाफटाइममा हाम्रा दोकानमा जान्थ्यौं । म आमालाई सामान बेच्न सघाउन थाल्थें । उसका तिखा आँखा कसैले सामान टिपेर हिंड्छ कि भनी सचेत रहन्थे । दोकानमा सघाए बापत आमाले हामी दुवैलाई नेबिको बिस्कुट दिन्थिन् ।
कहिलेकाहीं लाग्थ्यो, ऊ घामजस्तै थियो । म उसको प्रकाशसँगै जाग्ने बिहानजस्तै । तर, म दिन बनें । ऊ कतै रात भइ हराइगयो । काश ! उसले स्कूल नछोडेको भए...
एउटा नमीठो सम्झना बनेर बसेको छ त्यो दिन । त्यो क्षण । त्यो प्रहर । एकाएक मध्याह्नमै घाम अस्ताएको थियो त्यो क्षण ।
त्यो दिन स्कूलबाट फर्किंदै गर्दा मैले उसको हात समाएकी थिएँ । सबैका आँखा आश्चर्यले हामीमा टाँसिएका थिए । तर, मलाई संसारको मतलब थिएन ।
‘तँ किन... किन... ?’, थाहा छैन म के सोध्दै थिएँ । मेरो मुखबाट शब्द नै निस्कन मानिरहेका थिएनन् । मानौं कसैले घाँटी अँठ्याइदिएको थियो । एकाएक मेरा आँखा बग्न थालेको थिए । म जान्न चाहन्थें– किन मेरो प्रिय साथी मसँगै टाढिंदै गएको थियो ? मेरो प्रतिविम्ब मैबाट हराउँदै गएको थियो ? सधैं समयमै स्कूल पुग्ने । अघिल्लो बेञ्चमा बस्ने । हरेक कक्षामा ध्यान दिएर पढ्ने । मेरो साथी किन बदलिंदै गएको थियो ? किन ऊ मसँगै स्कूल आउन छोडेको थियो ? र, बारम्बार गयल हुन थालेको थियो ?
मलाई सोध्नै आएन । म रोइदिएँ । शब्द रोकिएपछि आँसु बहँदो रै’छ ।
‘म अबदेखि स्कूल आउन्न’– चट्याङ खसेजस्तो आवाज पर्‌यो मेरा कानमा । मानौं मैले नसोधेका सबै प्रश्नको जवाफ उसले एक वाक्यमा दियो ।
झसँग भएर हेरें उसलाई । मुस्कान भरिने उसका ओंठ उदासी च्यापेर बसेका थिए । फुर्तिलो देखिने उसको ज्यान पत्थरको मूर्तिजस्तै निर्जीवसरह देखिन्थ्यो । सधैं जिन्दगीको उत्साहले उज्यालो हुने उसको मुहार मानौं औंसीको रात भएको थियो ।
‘नाङसाल...भन् न.. के भयो ?’ मैले उसको हात समाएँ ।
चाहन्थें, उसको मनमा मच्चिरहेको आँधीबेहरी थामथुम पारिदिऊँ । फूलसँग मागेर अलिकति मुस्कान उसको ओठमा टाँसिदिऊँ । घामसँग मागेर अलिकति उज्यालो उसको नयनमा भरिदिऊँ । तर, ऊ त बूढो रूखजस्तै ठिंग उभिएको थियो । र, उसका आँखा ताल भइसकेका थिए ।
‘म अब स्कूल आउन्न’, ताल नदी बन्यो । मैले उसका गाला पुछिदिएँ । उसले पीडा ओकल्यो– ‘म आफैंले आफैंलाई नचिन्ने स्कूलमा आउन्न जमुना ! म स्कूल आउन्न !’
मेरो भागमा फेरि पनि अत्यास पर्‌यो । झसंग भएँ म । ओहो ! यत्रो चोट परेको रै’छ उसलाई । मैले बुझ्नै सकिनँ ।
स्कूल फेरिएसँगै उसको नाम फेरिएको थियो ।
कक्षा–८ उत्तीर्ण गरेपछि हामी मुजुरधापका विद्यार्थी रहेनौं । बजारको भुटनदेवी मावि पढ्न जाने उल्लासले हाम्रा खुट्टा भुईंमा थिएनन् । ऊ त झन् स्कूल फस्र्ट भएको थियो । सर्टिफिकेटमै लेखिदिएका थिए सरहरूले– ‘ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट ।’
भुटनदेवी मावि हाम्रो लागि बजार जत्तिकै नौलो थियो । एकाधपटक नेपाली सिनेमा हेर्न बाहेक बजार गएका थिएनौं हामी । हाम्रा लागि बजार होहल्ला थियो, भीडभाड थियो, अपरिचितहरूको भेल थियो, हराउने भय थियो । भुटनदेवी माविमा पहिलो दिन जाँदा हाम्रो मनमा जति उमंग थियो, त्यति नै थियो एकप्रकारको भय पनि ।
र, पहिलो दिन नै उसलाई ठेस लाग्यो । लागेको थियो, उसको मार्कसिट र सर्टिफिकेट हेरेर भुटनदेवीका शिक्षकहरू दंग पर्नेछन् । एउटा उत्कृष्ट विद्यार्थी पाएकोमा खुशी हुनेछन् । नयाँ स्कूलमा पाएको पहिलो प्रतिक्रियाले हाम्रा शिर गर्वले उठ्नेछन् ।
तर, पहिलो दिनमै ठेस लाग्यो । उसको शिर झुक्यो ।
हाम्रो भर्ना गर्न रजिस्टर बोकेर बसेका मुखिया सरका आँखा उसले पाएको नम्बरमा होइन उसको नाममा अड्किए ।
‘कस्तो नाम हो यो ? नाङसाल रे ? यस्तो नि नाम हुन्छ ?’ मार्कसिटको पुछारतिर हेर्दा पनि नहेरी बोले मुखिया सर । र, फर्मान जारी गरे– ‘यो नाम बोलाउन नि गाह्रो हुन्छ । तिम्रो नाम फेर ।’
नाङसालले नाइँ भन्न सकेन ।
मेरा ओठ सिलाएसरी बन्द भए ।
नाङसालका बा निरीह देखिए ।
‘ल आजबाट तिम्रो नाम आशिक ! आशिक सिङतान’, मुखिया सरले एउटा नयाँ नाम चढाए रजिस्टरमा । त्यसको मुनि थपियो मेरो नाम– जमुना दुवाडी । मैदानमा भिड्नु अगावै नै आत्मसमर्पण गरेर हिंड्न विवश सिपाही जस्तै हाम्रो अनुहार लत्रिएको थियो ।
त्यसको एकदिन पछि । पहिलो पिरियड । हाजिरी गर्दै थिए, राधाकृष्ण सर । सबैको नाम लिएर बोलाउँदै थिए ।
‘यस सर ।’
सरले पालैपालो नाम बोलाए ।
‘आशिक सिङतान ।’
राधाकृष्ण सरले चारैतिर हेरे । नाङसाल कक्षामै थियो । तीनपटक बोलाउँदासम्म पनि हाजिर नबोलेको देखेर सर रन्थनिए । उनले नाङसालको कठालोमा समाए । अनि तान्दै कक्षामा सबैको अगाडि उभ्याए ।
‘यो उल्लुको नाम मैले तीन पटक बोलाएँ । यस सर नै भनेन । कक्षामा गफ चुटेर बस्ने । यसले कतिसम्म हेप्दो रहेछ । ल उठबस गर ।’ राधाकृष्ण सर नेपाली फिल्मको राते काइँलाजस्तै जंगिए । कान समाएर तीस पटक उठबस गर्न लगाए ।
मुजुरधापको जेहेनदार विद्यार्थी नाङसाल भुटनदेवी माविमा पहिलो दिन नै उठबस गर्दै थियो । ऊ स्कूल फस्र्ट भएको थियो । उसको सर्टिफिकेटमा सरहरूले ‘ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट’ लेखेका थिए । स्कूलबाट विदाई हुँदै गर्दा उसको अनुहार अबिरले रंगिएको थियो । र, ऊ बजारको विद्यालयमा पहिलो दिन नै लज्जित भएको थियो । उसको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको थियो । दिनभरि बेञ्चमा मुन्टो गाडेर बस्यो ऊ ।
‘आशिक भनेर बोलाउँदा म झुक्किएँ । अरू कसैलाई बोलाएको ठानें’, बेलुका घर फर्किंदा मसँग पोखिएको थियो नाङसाल ।
त्यही दिनदेखि त मेरो घामजस्तो साथी रातजस्तै भएको थियो । शायद ऊ पहिलो कक्षा मिस गर्न चाहन्थ्यो । कसैले थोपरिदिएको नाम स्वीकार्न चाहँदैनथ्यो । हाजिरीबाट भाग्न चाहन्थ्यो ।
‘आशिक मेरो नाम नै होइन, कसरी सम्झिउँ म ?’, धेरै पछिसम्म झुक्किरहन्थ्यो ऊ । शायद उसले आफ्नै नझुक्किने कसम खाइसकेको थियो । र त भन्यो– ‘म आफैंलाई नचिन्ने स्कूलमा आउन्न जमुना ।’
नभन्दै ऊ स्कूलबाट बिस्तारै–बिस्तारै–बिस्तारै गयल हुनथाल्यो । हरेक दिन स्कूल निस्कँदै गर्दा मेरा आँखा उसलाई खोज्थे । तर, ऊ मैले पनि नदेख्ने गरी गयल भइसकेको हुन्थ्यो ।
क्यालेण्डरका पानामा धूलो थपिंदै गयो । विगत दिनका स्मृति पनि धुमिल हुँदैगए । म बजारबाट शहर आएँ । जिन्दगीका उकाली–ओरालीहरूले स्कूलकी मास्टर्नी बनायो । ऊ कहाँ होला ?
स्मृतितालमा हराइरहेकी थिएँ । एकाउन्टेन्ट सरको आवाजले झसँगै भएँ । भन्दैथिए– ‘नामग्याल तिम्रो नाम उच्चारण गर्न अप्ठेरो छ । नाम फेर ।’
‘होइन । नामग्याल नै ठीक छ’, मैले हस्तक्षेप गरें ।
‘तर म्याडम’, एकाउन्टेन्ट सर बोल्दैथिए मैले बीचमै रोकें उनलाई, ‘उसलाई आफ्नै नामले चिनिन दिनुपर्छ ।’
मेरा आँखा फेरि उसको अनुहारमा पुगे । उस्तै आँखा, उस्तै नाक, उस्तै ओठ, उस्तै मुहार । हठात् ! मेरा ओठबाट एक वाक्य फुस्कियो, ‘म अर्को नाङसालको पलायन भोग्न सक्दिनँ ।’
‘म्याडम तपाईंले मेरो बुबालाई चिन्नुहुन्छ ?’, मेरो आवाज सुनेर त्यो केटोको अनुहारमा आश्चर्यका सयौं तरंग दौडिए ।
‘अब त त्यो परिचय पनि पुरानो भइसक्यो’– भन्ने मन थियो, भन्नै सकिनँ । भनें यत्ति– ‘नामग्याल तिम्रो परिचय फेरिनुहुँदैन ।’
तपाईंको प्रतिकृया दाखिला भयो।
हिमालमिडिया प्रा.लि, पाटनढोका, ललितपुर
फोन : ०१-५००५६०१